PetrPikora.com on July 10, 2019
Paseky nad Jizerou lee site na elu nke 06.04.2018. Paseky nad Jizerou bụ obodo nta nke dị n'ógbè Semily, nke dị na Liberec, n'ebe ọdịda anyanwụ Giant Mountains na n'ókè nke ugwu Jizera, n'akụkụ aka nri nke Jizera Mine. 252 bi ebe a; Ọnụ ọgụgụ ụlọ na ụlọ ndị ọzọ dị ugbu a maka oge ntụrụndụ. Ógbè ugwu nke obodo ahụ bụ Giant MountainsNational Park, nke dị n'ebe ndịda tinyere ebe obibi ndị isi na PLA Giant Mountains. O nwere ike ịbụ obodo 16. Otú ọ dị, ihe ndekọ kacha ochie na 1654. Ebe kachasị bụrụ akụkụ bụ Makov, ebe iko ahụ dị adị, na ọlaọcha Silver. Ka oge na-aga, oké ọhịa dị nso n'ebe ọrụ mmadụ na-arụ na ụlọ ọhụrụ dị iche iche gosipụtara ụlọ ndị ọzọ, ndị bi na ya na-abụkarị ndị na-akwa ákwà. Nkume ndị sitere na ebe ndị a na-egbute osisi na-elekwasị anya n'osisi ndị dị ugbu a.
Na 1789 ụlọ ụka ahụ ka e wuru ma na 1791 nkuzi ụlọ akwụkwọ mgbe niile na Paseky. Onye nkuzi obodo, cantor Josef Šimůnek na onye enyemaka ya Věnceslav Metelka kuziri ụlọ akwụkwọ mpaghara ahụ, ndị ghọrọ ndị mmalite nke egwu, ihe nkiri, agụ na ọdịnala ọgaranya. Věnceslav Metelka zụrụ azụ dị ka onye na-akụzi violin onwe ya ma guzobe ọdịnala nnweta ezinụlọ site na nke a na-akpọ. Krkonošeụlọ akwụkwọ violin, ka dị ndụ n'ụwa na genera Pilařů, Špidlenů na Vedralů. Mgbe Agha Secondwa nke Abụọ gasịrị, ọdịbendị egwu nke onye nkụzi Pasek violin František Vedral agbakeela ruo nwa oge, mana na ngwụsị nke iri ise, ndị otu egwu na ụlọ ihe nkiri amateur n’anya. Na asaa nke 20. narị afọ na-arụ ọrụ n'ime obodo na ụka. Vaclav Nna MUDr. Ladislav Kubíček. N’afọ 1980 ka abụrụ ụka Wenceslas Choir n’ụlọ ụka. ukwe ukwe jiri ndi nlere ndi oru egwu egwu.
A raara akụkọ ọdịnala obodo ahụ nye na Museum nke Lost Patriots n'ụlọ gara aga, ụlọ na-esote Wlọ ụka St Wenceslas na ebe nri ụlọ Na Budárce dị. A raara ebe ngosi nka nye aka nke ndi violin na ihe omuma Věnceslav Metelka na onye ode akwukwo Karel Václav Rais, ndu ndi bi n’elu ugwu n’ime 19. narị afọ, violin na ịkpụ akwa. Emere ihe ncheta ahụ na 1958 n'ime ime ụlọ nke akụkụ anọ nke azụ ahụ, na 1975 e wughachiri ya dịka ederede site na PhDr. Jaromír Jech, connoisseur na onye na-ede akwụkwọ nke ọrụ Metelka. Na 1978, ekpughere ekpughere ya n’elu elu ụlọ. Thelọ ebe a na-edebe ihe ngosi nka ugbu a Giant Mountainsogige mba.
Obodo nta ahụ na obodo Zlatá Olešnice na Kořenov dị n'ebe ọdịda anyanwụ (Rejdice, Příchovice na Polubný), na Jizerou na obodo dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ Harrachov, n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Jizera na obodo ahụ Rokytnice (Dolní Rokytnice), n'ebe ndịda na ókèala obodo Vysoké nad Jizerou (dị nso Sklenařice) na obodo ahụ Jablonec nad Jizerou.